Amathrendi we-Web to Print Technology 2022 - Print Peppermint
January 20, 2022 | phrinta umkhakha, tech, izitayela
I-Web to Print ibona ukukhula okukhulu. Lobu buchwepheshe busiza amabhizinisi okuphrinta ukuze akhe amathuba abalulekile emhlabeni we-inthanethi.
Ngaphandle kwesidingo senqubo yendabuko neyinkimbinkimbi yokuthuthukisa iwebhusayithi, amabhizinisi angasebenzisa iWebhu ukuze Izitolo Zokuphrinta ukuze ziqalise isitolo sabo. Lezi zitolo esezilungile ziza nazo zonke izici ezibalulekile amabhizinisi azidingayo ukuze aqale ukuthengisa imikhiqizo yangokwezifiso ku-inthanethi.
Ukwengeza, amabhizinisi angahlanganisa I-Web ukuze Ithuluzi Lokuphrinta Lokuphrinta ukunika amandla ukwenziwa ngokwezifiso komkhiqizo esitolo sabo, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ulwazi lokuthenga.
Nakuba ubuchwepheshe bukusiza ekufinyeleleni zonke izinjongo zebhizinisi lakho, udinga ukuhambisana nentuthuko yamanje ku-Web to Print ukuze uhlale uqhudelana.
Njengoba singena onyakeni omusha, lokhu okuthunyelwe kuzokusiza ukuthi uthole umbono ophelele wamathrendi azohlala efanelekile ngo-2022 neminyaka ezayo.
1. Ukuphrinta Okuzenzakalelayo Akuyona Into Ewubukhazikhazi kodwa Ibalulekile
I-Automation ibisohlwini lwezitayela zakamuva ze-W2P isikhathi eside manje. Futhi ngeke iphele noma nini maduze. Ayanda amabhizinisi abona inzuzo yokuzenzakalela ukwenza izinqubo zawo zisebenze kahle, futhi zikhiqize.
I-automation ekuphrinteni imayelana nokuzenzakalelayo kokuhamba komsebenzi. Kodwa kungani ibaluleke kangaka? Njengomnikazi webhizinisi lokuphrinta, udinga ukunakekela izinto eziningi. Isibonelo, izikhathi ezimfushane zokuhola, ikhwalithi yokuphrinta enhle, amaphutha ayiziro, ukuthunyelwa ngesikhathi nokulethwa, njll.
Ukuze uphathe ngempumelelo zonke lezi zici, kubalulekile ukuthi uthuthukise izinqubo zebhizinisi lakho. Ukwehluleka ukwenza lokho kuholela emaphutheni abantu abalulekile, ukuchitha isikhathi, futhi ekugcineni ubambezeleke ezinhlosweni zakho zebhizinisi ozifisayo.
I-automation ikusiza ukuthi wehlise amaphutha angaba khona futhi inciphise imisebenzi ephindaphindwayo. Lokho kusiza ekuthuthukiseni ukusebenza kahle, futhi wena nabasebenzi bakho nithola isikhathi esengeziwe sokugxila kulokho okubaluleke ngempela. I-automation ephumelelayo ayiphumeleli nje ekukhiqizeni okuphezulu kodwa futhi nenzuzo.
Inqubo yokuphrinta okuzenzakalelayo akudingeki ibe yinkimbinkimbi. Okokuqala, awudingi ukuzenzela wonke umugqa wakho wokukhiqiza. Ngisho nezinga elincane le-automation lingaholela emiphumeleni engcono. Ngokwesibonelo, cabangela inqubo yokuqinisekisa umsebenzi wobuciko.
Indlela elawulwa mathupha yokuhlola umsebenzi wobuciko iyakhathaza. Kubandakanya izihibe ezingapheli zempendulo, ama-imeyili, imilayezo, njll., ngaphambi kokukhiqiza ifayela elilungele ukuphrinta. Lokho kubambezela inqubo yokuphrinta noku-oda, okungeyona into enhle.
Nokho, uma unayo IWebhu Yokuphrinta Izixazululo njengethuluzi lokuhlola umsebenzi wobuciko, ungakwazi ukuthuthukisa lezi zinqubo futhi uthuthukise ukusebenza kahle. Emakethe, kukhona ama-Print ERP ahlukene atholakalayo angagcini nje ngokukunikeza ithuluzi lokugunyaza umsebenzi wobuciko kodwa futhi asize ukwenza kube lula ezinye izinqubo.
Ukuba nesofthiwe yokuphrinta ye-ERP kuzokuvumela ukuthi ubeke iso kukho konke ukusebenza kwebhizinisi okubalulekile kusixhumi esibonakalayo esisodwa. Ungakwazi ukunakekela yonke into, okuhlanganisa ukuphathwa kwe-oda, umsebenzi wokuphrinta, umsebenzi wobuciko, ukuphathwa kwabasebenzisi, uhlu lwempahla, izingcaphuno, nokunye okuningi.
2. Ukuhlanganisa Iwebhu Esitolo Sokuphrinta Nozakwethu Wokugcwalisa
Ubuchwepheshe be-Web to Print buye benza kwaba lula ukuthi amabhizinisi okuphrinta aqhube imisebenzi ye-inthanethi. Amakhasimende angaphequlula futhi afake i-oda ku-inthanethi ngesitolo se-Web to Print. Kodwa-ke, udinga ukuthumela futhi ulethe i-oda ngesikhathi.
Ukuba nokuthunyelwa kwangaphakathi noma uzakwethu wokugcwalisa kuyadingeka ukuze kuthunyelwe ama-oda asheshayo nokugcwalisa. Amabhizinisi aphendukela ekugcwalisekeni kwenkampani yangaphandle ukuze onge isikhathi nezinsiza futhi andise ukusebenza kahle.
Izinkampani ezigcwalisa amaphrinta zimboza yonke into, okuhlanganisa ukupakisha, ukuthumela, ukulethwa, nokuningi. Abahlinzeki besevisi yokugcwalisa ukuphrinta abadumile yi-Printify, Printful, Gooten, Zazzle, RedBubble, njll.
Lapho usebenzisana nalezi zinsizakalo, udinga ukucabangela izinto ezimbalwa. Ezinye izici okufanele zicatshangelwe amazinga ekhwalithi, ukusebenziseka kalula, ukwenza ngendlela oyifisayo, amanani okuncintisana, kanye nokuvumelana nezimo.
3. Ukukhula Okumangalisayo Kokwenza Umkhiqizo Ngokwezifiso
Amabhizinisi okuphrinta adinga ukubheka ngale kwezindlela zokuhlinzeka ngemikhiqizo ejwayelekile futhi esikhundleni salokho abhekelele okuthandwa yiwo wonke amakhasimende. Bayabona ukuthi wonke umthengi oza esitolo sakhe ufuna umkhiqizo womuntu siqu ofana kangcono nezidingo zabo.
Futhi yingakho amabhizinisi eseqalile ukuhlinzeka ngemikhiqizo engenziwa ngendlela oyifisayo ukuze ifane nokulindelwe ngamakhasimende awo. Ukunikeza ukwenziwa ngokwezifiso komkhiqizo kuza nezinzuzo eziningi ezifana nokwanda kokuzibandakanya komsebenzisi, ukwaneliseka kwamakhasimende okungcono, ukwethembeka kwamakhasimende okuthuthukisiwe, nokuguqulwa okwengeziwe.
I-Web to Print Software njengethuluzi Lokuklama Umkhiqizo ikusiza ukuthi uqalise ngokwenza umkhiqizo ngokwezifiso esitolo sakho se-inthanethi.
Uma usuhlanganisa ithuluzi nenkundla yakho ye-eCommerce, amakhasimende okugcina azokwazi ukusebenzisa ithuluzi ukwenza imikhiqizo yawo ibe ngokwezifiso. Isibonelo, uma unewebhusayithi kuMagento, udinga ukubheka i- Umklami Womkhiqizo weMagento lokho kuhambisana nesikhulumi.
Womabili amabhizinisi e-B2B kanye ne-B2C angasebenzisa ithuluzi ukuze anikeze imikhiqizo engenziwa ngokwezifiso. Kunamathuluzi amaningi emakethe ongakhetha kuwo. Kodwa ngemiphumela emihle, kuhlale kuwumqondo omuhle ukwenza ucwaningo olunzulu.
Ngaphambi kokuthi sikhulume kabanzi mayelana nethuluzi, ake sibheke izibonelo ezimbalwa zamabhrendi anikeza ukwenziwa ngokwezifiso komkhiqizo.
Isibonelo esikhulu kunazo zonke i-CustomInk enkulu ethengisa inqwaba yemikhiqizo, okuhlanganisa izingubo zokugqoka, imikhiqizo yokukhangisa, njll. Banelebhu yokuklama ezinikele lapho abathengi bengasebenzisa khona umcabango wabo futhi badale imikhiqizo ehlukile.
I-Bluesky ingesinye isibonelo semikhiqizo yokubhala yomuntu siqu efana nezincwadi zokubhalela. Ngokusebenzisa ithuluzi labo, amakhasimende angakwazi ukwengeza izithombe, enze ngendlela oyifisayo izitayela zozimele, ashintshe amafonti, imibala, njll.
Kubalulekile ukutshala imali ethuluzini elicebile kodwa elisebenziseka kalula. Ithuluzi eline-UI/UX enhle lizokusiza ukuletha ukwenza ngendlela oyifisayo ngempumelelo. Ngesikhathi esincane nangendlela engenamaphutha, abasebenzisi bokugcina bangaqeda ukuklama umkhiqizo wabo futhi baqhubekele phambili nokuthenga.
Ngokuvamile ithuluzi lizofaka izici ezifana nomhleli wombhalo nesithombe, isistimu yentengo eguquguqukayo, ukulayishwa kwesithombe ngokwezifiso, umphathi wangemuva, umsebenzi wobuciko nezifanekiso, ukuphathwa kwento nesindlalelo, nokunye.
4. Ukunyuka Kobuchwepheshe Bokuphrinta be-3D
Ukuphrinta kwe-3D sekuhamba phambili. Ngokombiko kaSmithers, imakethe yokuphrinta ye-3D isethelwe ukukhula okuphezulu. Ingase ikhuphuke isuka ku-$5.8 billion ngo-2016 iye ku-$55.8 billion ngo-2027.
Ngomqondo oyisisekelo, ukuphrinta kwe-3D kuyinqubo yokudala izinto ezinezinhlangothi ezintathu ngokusekelwe kumodeli yedijithali eklanywe kusengaphambili. Kuwuhlobo lobuchwepheshe bokubeka izingqimba lapho wenza khona imikhiqizo ngokuphrinta izendlalelo phezu kwezingqimba uze uthole umkhiqizo wokugcina.
Ukuphrinta kwe-3D kwaziwa kakhulu njengokukhiqiza okungeziweyo ngoba kule nqubo, wakha into kusukela ekuqaleni ngokuphambene nendlela yokukhipha yokusika noma yokubhoboza into.
Inqubo yokuphrinta ye-3D iqala ngokwenza imodeli yesithombe yento edinga ukuphrintwa. Into yakhelwe ngosizo lwe-Computer-Aided Design Software.
Isinyathelo esilandelayo ukuthumela ifayela ku-software yokusika esika umklamo ube izendlalelo ezihlukene. Bese ukhiphela ifayela elisha kuphrinta ye-3D, futhi izophatha okunye.
Manje ake sikhulume ngezinzuzo zokuphrinta kwe-3D. Inzuzo enkulu yobuchwepheshe ukuthi yonga isikhathi. Uthola imiphumela ngesikhathi esincane ngangokunokwenzeka ngekhwalithi edingekayo.
Futhi yingakho lolu hlobo lwenqubo yokukhiqiza lwaziwa nangokuthi i-prototyping esheshayo. Kuyisinyathelo esisodwa sokwenza inqubo enciphisa isikhathi sokucubungula futhi ilethe umkhiqizo wokugcina ngokunemba.
Ukuphrinta kwe-3D nakho kukunikeza inkululeko nokwenza kube lula ukwenza ngokwezifiso. Abakhiqizi bangashintsha umumo nomklamo wemikhiqizo ukuze ihlangabezane nezidingo eziqondile zekhasimende ngalinye.
Isibonelo sokuphrinta kwe-3D yi-Nike. Ingenye yezandulela zokuthuthukisa ubuchwepheshe embonini yezicathulo.
5. I-inthanethi Yezinto Isiyaduma
Uguquko lwesine lwezimboni lushintsha indlela izinkampani ezikhiqiza ngayo futhi zisabalalise ngayo imikhiqizo yazo. I-inthanethi Yezinto isithinte nemakethe yokuphrinta. I-IoT iwukhiye wokunika amandla ubuchwepheshe ku-Industry 4.0.
Igxile kubuchwepheshe obufana ne-inthanethi Yezinto, Ukuhlakanipha Kokwenziwa Nokufunda Ngomshini, I-Cloud Computing ne-Analytics, nokuningi.
Ngendlela uguquko lwesine lwezimboni oluhambisana ngayo nezimoto ezizishayelayo, lubalulekile nasembonini yokunyathelisa. Imishini yezimboni, isibonelo, imishini yokunyathelisa, ixhunywe ku-inthanethi. Bangakwazi ukudlulisa idatha ifu elihlaziya ngokuzenzakalelayo. Ungathola imininingwane ngokulungiswa kokubikezela, njll.
I-inthanethi Yezinto ehlanganiswe nokuphrinta kwe-3D isiza ekwakheni imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso ngosizo lwedatha eqoqwe kumadivayisi axhumekayo.
Ukuze ahlale enokuncintisana, umuntu udinga ukubhekisisa intuthuko yakamuva emakethe.
I-automation ibonakala ikhula ngesivinini sombani. Amabhizinisi athuthukisa ukusebenza kwawo ukuze akhiqize kakhudlwana futhi asebenze kahle.
Okwesibili, uma ungakacabangi ukwenza ngokwezifiso, manje yisikhathi esifanele. Ngemikhiqizo ongayenza ngendlela oyifisayo, uzokwazi ukuletha inani elithe xaxa kumakhasimende akho futhi uthuthukise ukwethembeka kwamakhasimende.
Ngakolunye uhlangothi, ukuphrinta kwe-3D ne-IoT nakho kuya ngokuya kuba nomfutho. Sithemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kukusize ukuthi uthole ukuqonda okucacile kwamathrendi amanje kubuchwepheshe be-Web to Print.
UMnu. Pratik Shah uyiNhloko Ehlakaniphile Ye-Brash Your Ideas, umhlinzeki wekhambi lobuchwepheshe be-Web-to-Print olusezingeni eliphezulu ohlinzeka nge-Custom Product Design Software kanye newebhu yokuphrinta isofthiwe yangaphambili kwesitolo. Ube namandla okudala nokushayela empumelelweni yethu Ithuluzi Lokuklama Umkhiqizo.
Landela Okwengeziwe: Twitter | Facebook | LinkedIn
← Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami?
Amathiphu angu-10 Wokuklama Amaphepha Okuyisa Uphawu Lwakho Kuzinga Elilandelayo →